Malta Isi Obodo Valletta: Onyinye 5 kacha mma kacha mma n'obodo obere obodo
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Malta » Malta Isi Obodo Valletta: Onyinye 5 kacha mma kacha mma n'obodo obere obodo
Awards • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ogige Barrakka dị na Valletta, Malta isi obodo
Condé Nast Onye Njem kwupụtara nsonaazụ nke kwa afọ Nhọrọ Nhọrọ Ndị Na-agụ Akwụkwọ 2020 na Valletta, Malta Isi Obodo, a UNESCO World Heritage Site, họọrọ # 5 na Bestwa Obere Obodo Atiya.
Valletta, nke ndị Knights St John dị mpako wuru, ka akpọrọ 2018 European Capital of Culture. Obodo bara ụba n'akụkọ ihe mere eme, n'ime afọ ole na ole gara aga Valletta aghọọla onye ama ama na ndị ọbịa maka mmemme ọdịnala ya, nnukwu ụlọ nri, na ndụ abalị. Valletta nwere ụlọ oriri na ọ Micheụ Micheụ Michelin abụọ, Noni na Ọka n'ihi na Egwuregwu nke n'ocheeze (GOT) fans, ha ga-amata ọtụtụ ihe nkiri gbara na Valletta mgbe ọtụtụ n'ime Nwetara oge 1 gbara na ọnọdụ na Malta.
“Maltese niile bụ nnọọ nsọpụrụ na mpako na Valletta ahọrọ ma họọrọ # 5 na Obere obodo kacha mma nke uwa site na ndị na-agụ ụdị nkwanye ugwu ugwu dị egwu dịka Conde Onye Nast, ”Ka Carlo Micallef, osote onye isi oche, Chief Marketing Officer, Malta Tourism Authority kwuru. Ọ gbakwụnyere, "Anyị na-akpọ ndị nwere ọ Valụ Valletta ka ha lọta n'ihi na obodo na-agbanwe mgbe niile na ndị na-etinyebeghị ya na ndepụta ịwụ ha 2021."
Karịa 715,000 Condé Nast Onye Njem ndị na-agụ akwụkwọ nyefere ọtụtụ nzaghachi na-egosi ahụmịhe njem ha gafere ụwa.
"Ihe nchoputa nke afọ a, nke emere na mmalite nke oria ojoo COVID-19, bu ihe akaebe nye ikike na-adigide nke omuma njem bara uru," ka Jesse Ashlock, US Editor nke US kwuru. Condé Nast Onye Njem. "Ndị mmeri na-anọchite anya ndị kacha mma kachasị mma maka ndị na-ege anyị ntị ma na-enye ọtụtụ mmụọ ịhazi njem maka ọhụụ niile anyị na-enweghị ike ichere inwe ọzọ."
The Condé Nast Onye Njem Ihe Nhọrọ Ndị Na-agụ Akwụkwọ bụ ogologo oge na-adịkarị ogologo na nkwanye ugwu kachasị mma na ụlọ ọrụ njem. Enwere ike ịchọta ndepụta nke ndị mmeri na Condé Nast Onye Njem website.
A na-ebipụta akwụkwọ nhọpụta nhọrọ nke 2020 Readers Condé Nast Onye Njem website na www.cntraveler.com/rca na-eme ememe na November nke Condé Nast Onye Njem US na UK mbipụta mbipụta.
Agwaetiti ndị anwụ na-acha na Malta, nke dị n’etiti Oké Osimiri Mediterenian, bụ ebe obibi dị oke ịtụnanya nke ihe nketa na-emebibeghị, gụnyere nke kachasị elu nke UNESCO World Heritage saịtị na mba ọ bụla-steeti ebe ọ bụla. Valletta nke ndị Knights St St. ahụ dị mpako wuru bụ otu n'ime nlegharị anya UNESCO na European Capital nke Omenala maka afọ 2018. Ebumnobi nke Malta na okwute sitere na ụlọ okwute kachasị ochie na-akwụghị ụgwọ ọ bụla n'ụwa, rue otu n'ime Alaeze Britain kachasị egwu. usoro nchebe, ma gunyere ngwakọta nke ụlọ, okpukpe, na ụlọ agha site n'oge ochie, ochie na oge oge a. Site na ihu igwe na-achasi ike, osimiri mara mma, ndụ abalị na-eme nke ọma, na afọ 7,000 nke akụkọ ihe mere eme na-akpali akpali, enwere nnukwu ọrụ ịhụ na ime. Maka ozi ndị ọzọ na Malta, gaa na www.visitmalta.com.